Luulyo 30, 2019 7:17 b 0
1. Degmada Dhanaan ee gobolka Shabeelle waxaa ka jirta biyo la’an baahsan oo haddana aad looga dareemay deegaanka iyo degaano kale oo hoosyimaada degmada Dhanaan. Shacabka ayaa asbuucyadii la soo dhaafay walaac xooggan ka muujiyey biyo la’aanta deegaanka soo wajahday.
2. July 24 – Colaad ayaa ka taagan xadka ay wadaagaan gobolka Qoraxay ee DDS iyo gobolka Galgaduud ee Soomaaliya. Ugu yaraan hal Qof ayaa ku dhintay dagaal-beeladka xuduudda, tiro kalena waa ku dhawaacmeen, welina xiisaddu waa taagantahay waxaana is horfadhiya maleeshiyo beleed labada dhinac.
Maleeyshiya beeleedka is horfadhiya ayaa ka soo kala jeeda degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud iyo degmooyin dhaca Bariga gobolka Qoraxay ee DDS.
3. July 28 – Degmada Lahelow ee gobolka Doollo waxaa ka taagan khilaaf u dhexeeya ciidamada Liyuu Booliska ee hoosyimaada Guddoomiyaha degmada Lahelow iyo ururka ONLF oo laga xiray 4 xubnood oo ka tirsan Jabhada ONLF.
Xubnaha ururka ee la xiray ayaa kala ah:
Maxamed Aabid Warfaa
Cabdiraxmaan Ibraahim Macallin, iyo
Daahir Faacul Cabdi
Xubanaha ururka waxaa lagu xiray tuulada Dhurwaa Hararaf ee hoostimaada degmada Lahelow ee gobolka Doollo, waxaana hadda loo soo gudbiyay magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Doollo.
4. July 29 – Magalaada Goday ee gobolka Shabeelle ayaa waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidamada Itoobiya, kaas oo lagu sheegay in uu salka ku hayo fariisin cusub oo ciidamadu ay ka sameysteen magalaada Goday ee xarunta Gobolka.
Weli Lama oga sababaha rasmiga ee ka dambeeya dhaqdhaqaaqa cusub ee ciidamada Itoobiya iyo sababta dhalisay in ay saldhig cusub deegaanka ka yagleelaan. Dadka degaanka ayaa ayaguna Radio Daljir la qaybsaday in dhaqdhaqaaqa cusub ee ciidamada Itoobiya uu saameyn ku yeeshay isu socodka shacabka iyo degmooyinka gobolka.
Dowlad Deegaanka Soomaalida 95 Wararka 17261
Amniga deegaanada Puntland oo la adkeeyay iyo ciidamada oo howgalo wada ( dhegayso)